Bilaogy Bangla: Famahana Fady Sy Adihevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2017 15:32 GMT
(Fanamarihana, lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny Mey 2007 ity adika amin'ny teny Malagasy eto ity)
Feno hetsika ny sehatra bilaogy Bangla Bandh Bhanger Awaaj, ahitana resadresaka antserasera, adihevitra, sary-sy-soratra, famoahana lahatsoratra momba ny haisoratra. Manao izany ho sehatra velona ireo bilaogera an-jatony sy mpamaky an'arivony.
Miteraka fahalianana eo amin'ireo bilaogera sy mpamaky ny karazan-dahatsoratra. Vao haingana, nisy ny antso marobe hiara-hiresaka lohahevitra manokana sy famoahana lahatsoratra tantara noforonina. Nanangana ny hetsika i Sadiq tamin'ny fandefasana lahatsoratra ara-potoana momba ny nahandro amin'ny herinaratra. Naka tahaka azy ireo bilaogera hafa tamin'ny famahanam-bilaogy « mivantana » ny nahandro sasany.
Amin'izany tontolo izany, mampiasa ny sehatr'izy ireo manokana amin-kerimpo ireo bilaogera mba haneho ny hevitr'izy ireo sy ny fanontanian'izy ireo. Tao anatin'ny saina tia mitsikera, nanontany ilay bilaogera tsy mitonona anarana, Yusnkto, vao haingana hoe iza no mpanoratra ny Korany, boky masin'ny Miozolomana. Nanonona ny dokotera Ibne Wareq izy ary niezaka nanaporofo fa vavaka ataon'ny mpaminany Mohamed amin'Andriamanitra izany fa tsy tenin'Andriamanitra.
Niteraka resabe tao amin'ny bilaoginy izany, nanohitra izany ireo mpamaky sasany, nilaza fa manohintohina ny finoan'izy ireo ny fanaratsiana ny Korany. Na izany aza, naneho hevitra milamina ny sasany ary nanomboka nanadihady tsara ny lahatsoratra. Trivuz nampiseho fa diso i Yusnikto, satria ny fandalovan'ny Korany tenany dia mampiseho fa nentina ho an'ireo Miozolomana tamin'ny alalan'ny mpaminany Mohamed ny Korany. Manohana an'i Yusnitko kosa i Dikkhok dravid, nanoratra izy fa olombelona ihany no afaka manoratra, ary tamin'ny vanim-potoana an-tenatenany, dia lazaina mora foana fa avy amin'ireo andriamanitra sy andriamanimbavy ny andinin-tsoratra masina. Samudrer Uttal Torongo kosa nianiana fa tsy afaka ny ho nosoratan'ny olombelona ny Korany.
Tsy maharaka ny votoaty mipoapoaka tamin'ny lahatsoratr'i Yusnikto, nanapa-kevitra hamafa izany ireo mpandrindra ny tranonkala. Saingy nisy ny zava-nitranga tsy mahazatra. Bilaogera marobe no nanohitra ny famafàna ny lahatsoratr'i Yusnikto. Nilaza izy ireo fa manohintohina ny fahalalahana miteny izany. Maro no niaiky fa tsy maharesy lahatra ilay lahatsoratra, saingy mihevitra kosa fa tokony valiana tsikera ny tsikera, fa tsy sivanina. Naverin'ny mpandrindra ny tranonkala ihany avy eo ilay lahatsoratra.
Zavatra tsy mahazatra eo amin'ny fiarahamonina Bangla, maro an'isa Silamo izany. Tsy misy gazety sahy mamoaka karazana lahatsoratra tahaka izany. Ao amin'ny fiarahamonina maro eto amin'izao tontolo izao, lasa sakana amin'ny fahalalaham-pitenenana ny fanivanan-tena. Saingy ao amin'ny bilaogy, azo atao ny manoratra tsy mitonona anarana, ary matetika, toa lasa adihevitra mahasoa ny vokatra.
Mahbub Sumon[Bangalais] namintina ny raharaha ary nampahatsiahy amin'ireo bilaogera ny andraikitr'izy ireo:
Manan-jo hanoratra ny mpanoratra rehetra, sy fahalalahana haneho ny hevitr'izy ireo. Saingy tsy midika izany fahalalahana izany fa afaka manoratra na inona na inona izy ireo. Misy fetrany ny fahalalahana. Mino manokana aho fa lohahevitra azo iadian-kevitra sy ametraham-panontaniana ny fivavahana. Saingy tokony hifanaja sy mahomby ny adihevitra ary tsy mandratra ny fihetseham-pon'ny hafa.